Search ဂျပန်လိုးကားများသီးသန့် - GenFK.com
25 Sep 2018 · 3.3K views
သားသားမီးမီးတိုရေ.. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ နေ့စဉ်စားသုံးပေးရမယ်နော်. ဘယ်လိုအစားအစာတွေက ကျန်းမာစေသလဲ.? ဘယ်လိုအစားအစာတွေက မစားသင့်ဘူးလဲဆိုတာ သီချင်းလေးနားထောင်ကြည့်ရင်း မှတ်ထားနော်.:-) 🅱•MEDIA Children Nursery Songs, Educational VCDs & DVDs, Stories, Cartoons And Books Online Store. (Wholesale) မူကြိုတက်မယ့်ကလေးများနှင့်KGတက်မယ့်ကလေးများ🙇 #သီချင်းလေးတွေဆိုရင်းစာသင်ကြဖို့အတွက် 🎤 #ကလေးတို့ရွတ်ဆိုစရာအင်္ဂလိပ်တေးသီချင်းကဗျာများ 🎵 #KGသင်ကြားရေးအထောက်အကူVCD_DVDများ ~📀 #ပုံပြင်VCD_DVDများ ~📀 #ကာတွန်းVCD_DVDများ ~📀 B.Media မှ Products များကို အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင်.:-) ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များ 🛍 Update ️✔ Yangon 🏘 " New World Kid's Educational Toys Store " ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် ၇၂/၇၄၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်း (ရှမ်းလမ်းဈေးဘေး) ☎ 09-78000 6409, 09-96 099 7200 ⏰ 8:00 AM to 9:00 PM (ပိတ်ရက်မရှိပါ) " Baby Essential Online Store " ★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် ၁၀၀၊ ဗဟိုလမ်းမကြီး၊ ဂွဈေးအကျော် နေလဆန်ဆိုင်ဘေးကပ်ရပ် စမ်းချောင်း ☎ 09-73141523 "လရိပ်မေမေ" (La Yeik May May Online Shopping) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် 17, ကျောင်းလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ☎ 09-5100578p " Yadanar Baby Store " ★★★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် ၈၇၊ စမ်းချောင်းဗဟိုလမ်းမပေါ်၊ သံတံတားလမ်းထိပ် ☎ 09-799662855 " Mom&Baby Online Shop " ★★★★★★★✭★✭✭✭✭ 🏠 162/2၊ မြင်သာ ၁၀ လမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာ (စီမံကိန်းမှတ်တိုင်အနီး) ☎ 09-795712403 " Khit Online Store " ★★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် ၅၊ မဂ္ဂင်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ ☎ 09-798416652 " ကျားလေး " Kyarlay.com ★★★★★★★★★★★★★ 🏠 69, Waizayantar Road, South Okkalapa ☎ 09 966 162 405, 09 966 162 406 Website: www.kyarlay.com " New Life Baby Store & Online Shopping " ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 ​အမှတ်​-၁၃၇၆, ဗိုလ်​ချိုလမ်း, ၄၆-ရပ်​ကွက်​ မြောက်ဒဂုံ ☎ 09780952242 " Noe Noe Zayyar- Baby online shopping " ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 ​​အမှတ်​-၅၁, ဣစ္ဆာသယလမ်း, ၄-လွှာ, ခေါင်းရင်း ကျောက်မြောင်း-တာမွေ ☎ 09250535726 " Royal Hap Kids Toys & Books " ★★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 ဆိုင်အမှတ်-၇၈, အင်းစိန်လမ်းမကြီး, သုခလမ်းမှတ်တိုင်အနီး (UAB Bank ဘေး) လိူင်မြို့နယ်. ☎ 09960899596, 09786447496 " KBC Baby Store " ★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ်- ၂၄, ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် အောင်ဇေယျ (၁)လမ်း, သုဝဏ္ဏ (သုဝဏ္ဏဈေးအနီး) ☎ 09261401017 ပဲခူးမြို့ 🏘 " ပွင့်လန်းရွှေဆိုင် " ★★★★★★★ 🏠 အမှတ်114/ပဲခူးရန်ကုန်မင်းလမ်းမ/ဈေးပိုင်း/ပဲခူးမြို့ ☎ 095380502, 09790149803 မိုးညှင်းမြို့ 🏘 " MommyBaby " ★★★★★★★★ 🏠 ဆိုင်ခန်းအမှတ် (C1-C2) နမီးစုရပ်ကွက် ညောင်ပင်ဈေးဟောင်းလမ်း၊ မိုးညှင်းမြို့ ☎ 09-786263622 မြဝတီမြို့ 🏘 " လင်းသီရိ စတိုး " ★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ၊ မြဝတီမြို့  Mandalay 🏘 "Fancy House Store" ★★★★★★★★★★ 🏠 ရပ်ကွက်(၈),သိန်းနီလမ်း, လားရှိုးမြို့ ၂၉လမ်း,၇၃x၇၄ကြား,မန္တလေးမြို့ ☎ 09-785231939 " MJ store " ★★★★★★ 🏠 No.747 , 30th St, Bet 70×71 St Mandalay ☎ 09 402672677 / 09 420067701 Power Gold Mobile Shop ★★★★★★★★★★★★ 🏠 32 - 77 - 78 ကြား ☎ 092023884 ပြင်ဦးလွင် 🏘 "Baby Plus Kids Collection" ★★★★★★★★★★★★★ 🏠 မန္တလေး-လာရှိုးလမ်း၊ မောချယ်ရီတည်းခိုခန်းအနီး ရွှေရှမ်းစားသောက်ဆိုင်ဘေး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ☎ 09794988771 မော်လမြိုင် 🏘 " Baby Store " ★★★★★★★ 🏠 95/C အထက်လမ်းမကြီး ပန်းပဲတန်းရပ် (မင်းစည်းစိမ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကပ်ရပ်) ရုံးကြီးမှတ်တိုင် ‌☎ 09795281291 ; 09965295325 တောင်ကြီး 🏘 " Lucky Baby Online Shop " ထွန်းလင်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 🏠 အမှတ် ၈၈, နှင်းဆီလမ်း, ပြည်တော်သာရပ်
3 Sep 2017 · 3.1K views
ဒီလို ကြော်ငြာပုံတွေ ကောင်းလို့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ များနေတာကိုး…………..
ဒီလို ကြော်ငြာပုံတွေ ကောင်းလို့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ များနေတာကိုး………….. Ford ကားကုမ္ပဏီဟာ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော် ရပ်တည်လာတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Fordက ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားတွေရဲ့  ကြံ့ ခိုင်မှုကို ပေါ်လွင်အောင် ဘယ်လိုကြော်ငြာသွားလဲဆိုတာ…?? ဒီလို ကွျောငွာပုံတှေ ကောငျးလို့ဝယျခငျြတဲ့သူတှေ မြားနတောကိုး………….. Ford ကားကုမ်ပဏီဟာ နှဈပေါငျး တဈရာကြျော ရပျတညျလာတဲ့ ကမ်ဘာကြျော ကားကုမ်ပဏီကွီးတဈခုဖွဈပါတယျ။ Fordက ထုတျလုပျတဲ့ ကားတှရေဲ့ကွံ့ ခိုငျမှုကို ပျေါလှငျအောငျ ဘယျလိုကွျောငွာသှားလဲဆိုတာ…??
7 Jun 2018 · 50M views
26 Jan 2021 · 245 views
ကိုယ်ဝန်အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ မိခင်လောင်း သဇင် (ရုပ်သံအစီအစဉ်) ■ ပရိသတ်နဲ့ ကာလအတန်ကြာ ဝေးကွားနေတဲ့ အနုပညာရှင် သဇင်က လက်ရှိကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့  ရင်ခုန်သံစကားနဲ့အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းတွေကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
28 Feb 2018 · 1K views
ဦး​ရေ... ရှင်​ချစ်​ဖို့်​ကောင်း​နေလိုက်​❣️ သူရှက်​​နေတာ🥺 Lee Dong Wook with TT #k_memories
𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝗲𝗱 𝗛𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿
21 Dec 2021 · 44K views